धनकुटामा थापा काजीको प्रतिस्पर्धा : सीमित कार्यकर्ता तानातान - Hello Patrika
धनकुटा । देशमा अहिले चुनाव छैन । तर, धनकुटा चुनावमय जस्तै बनेको छ । बाढीले सडकहरु भत्काएको छ । मुख्य राजमार्ग पनि ठाउँठाउँ अवरुद्ध छन्, नेताहरु भने अवरुद्ध बाटो पन्छाउँदै चुनावी झल्को दिनेगरी गाउँगाउँ डुलिरहेका छन् ।
धनकुटा निर्वाचनको बेला खुबै तात्ने गर्छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए । थापा अरु बेला जिल्ला नआए पनि निर्वाचनका बेला जिल्ला आउथे र जिल्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्ने गर्थे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री थापाको मृत्यु भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । थापाको मृत्युपछिको चुनावी अभियानमा उनका छोरा सुनीलबहादुर थापाले केही समय चुनावी सरगर्मी बढाए । यद्यपि उनी नेकपाको गठबन्धनसामू निरीह बने । अर्थात् वाम गठबन्धनका राजेन्द्र राईसँग १० हजार ४ सय ५९ मतले पराजित भए ।
राईसँग पराजित भएपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभावमा रहेनन् । पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा महामन्त्री बने । तर, पार्टीभित्र जम्न सकेनन् । मालिगाउँको किचेन क्याविनेटमै सीमित बने । पार्टीभित्र फरक मत राख्दै आएका थिए ।
यो केही समय अघिसम्मको कुरा थियो । अहिले उनी फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने व्यक्ति बनेका छन् । यही साउन १३ गते नेपाली कांग्रेसमा सहमहामन्त्री पाउनेगरी प्रवेश गरेका छन् ।
गाउँ अभियानमा थापा काजीहरु
पूर्वप्रधानमन्त्री थापा पुत्र नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि सीमित कार्यकर्ता तानातान हुन थालेको छ । संगठन भन्दा पनि शक्ति, पैसा र भोट खरिद बिक्रीले धनकुटामा चुनाव जित्दै आएको राप्रपामा खासै धेरै कार्यकर्ता छैनन् ।
सूर्यबहादुर थापाको जिल्ला भए पनि कुनै पनि जनवर्गीय संगठन नबन्दा पनि थापाले चुनाव जित्दै आएका थिए । सोही ताल दोहोरिएको थियो सुनीलबहादुर थापाले यसअघि चुनाव जित्दा ।
सूर्यबहादुर थापालाई पटकपटक चुनाव जिताउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका भतिजा कुमारबहादुर थापासँग सुनीलबहादुर थापाको सम्बन्ध राम्रो छैन । उनीहरुबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि दुबै जना फरकफरक विचारमा लागेका छन् ।
गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म सँगै रहेका यी दुई थापाहरुबीच अहिले पानी बाराबारको अवस्थामा छन् । उनीहरु बीचको यो सम्बन्धका कारण औलामा गन्न सकिने कार्यकर्ताहरु अन्योलमा परेका छन् ।
पार्टी पनि फरकफरक बन्नु र सम्बन्ध नै बिग्रिएपछि यी दुई थापाहरु भएका कार्यकर्ताहरु आफूतिर आकर्षित गर्न कसरत गरिरहेका छन् । लगातारको वर्षाले बाटो भत्काएर हिँड्न नसक्ने अवस्था आउँदा पनि दुबै जना आफ्ना समर्थकहरुका साथ भदौको अन्तिम सातादेखि नै गाउँ दौडाहामा छन् ।
जिल्लामा राम्रो प्रभाव पारेका र कार्यकर्ताको रोजाइमा रहेका कुमारबहादुर थापा क्षेत्र नं. १ र २ मा कार्यकर्ता भेटघाटपछि जिल्लामा पार्टी कार्यालय सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् भने सुनीलबहादुर थापा क्षेत्र नं. २ मा कार्यकर्ता भेटघाटपछि प्रदेश नं. १ को चौविसे क्षेत्रमा कार्यकर्ता भेटघाट अभियानमा छन् ।
राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष कुमारबहादुर थापाको पक्षमा केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद घिमिरे, जिल्ला उपाध्यक्ष टिकाप्रसाद घिमिरे, क्षेत्रीय अध्यक्षहरु धर्मध्वज राई, श्याम गुरुङका साथै लक्ष्मी थापा, रेवतराम भण्डारी, चन्द्र याख्या, शंकर थापा, दुर्गा पुरी, पवित्रा श्रेष्ठ छन् ।
त्यसैगरी टेकबहादुर सारु, लोकेन्द्र घिसिङ, रेगेन्द्र लिम्बु, नगेन्द्र राई, जर्गमान राई, चन्द्र गुरुङ, रमेश चापागाई, नगेन्द्र पौडेल, नगेन्द्र अधिकारी, गोपाल निरौला, थामबहादुर राई, गोपाल राई, लोकबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाश लिम्बु, डिल्ली लिम्बु, चोलेन्द्र गिरी, रामप्रसाद वस्ती, भीम खतिवडा, गणेशबहादुर कार्की, उपेन्द्र कार्की, गणेश गिरीलगायत कुमारबहादुर थापाको पक्षमा खुलेर लागेका छन् ।
राप्रपामा रहँदा महामन्त्रीसमेत रहेका सुनीलबहादुर थापाको पक्षमा पदमबहादुर बस्नेत, मानबहादुर मिश्र, लक्ष्मी सुब्बा, माधव भट्टराई, चेतनाथ चापागाइँ, गोपालचन्द्र पौडेल, कृष्ण थापा लगायत छन् ।
जिल्लामा क्रियाशील नेता कार्यकर्ताको संख्या हेर्ने हो भने कुमारबहादुर थापा निक्कै बलियो देखिन्छन् । ‘मैले लामो समयदेखि संघर्ष गरेका कार्यकर्तालाई समेटेर लैजानु मेरो कर्तव्य नै हो’ कुमारबहादुर थापा भन्छन्, ‘अब कसैको दास बनेर जो जहाँ जान्छन्, त्यतै सँगै जान सकिँदैन र जानुपर्छ भन्ने पनि छैन ।’
सूर्यबहादुर थापाका छोरा पूर्वमन्त्री पनि हुन् । पैसा खर्च गर्न सक्ने हैसियत भएका कारण मतदाता सुनीलको पक्षमा जानसक्छन् । किन कि विगतमा पनि पैसा खर्च गरेर सूर्यबहादुर थापा र स्वयम् सुनीलबहादुर थापाले पनि चुनाव जितेका थिए ।
सुनील थापाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुमार आफ्ना दलबलका साथ २०७६ जेठ १८ गतेदेखि पार्टीबाट अलग भएका थिए । तर, सुनील नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि उनी फेरि राप्रपालाई व्यूँझाउन गाउँ अभियानमा छन् ।
सुनीललाई जसरी पनि कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो पकड बलियो बनेको देखाउनु छ भने कुमारलाई लामो समयदेखि जिल्लामा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमै टिकाइहनु छ ।
दुबै जनाले पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको लिगेसीलाई जोगाउन भएभरको बल प्रयोग गरिरहेका छन् । सुनीलले सूर्यबहादुर थापा आफ्ना पिता भएकाले सूर्यबहादुर थापाको लिगेगी आफुबाहेक अरुले जोगाउन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
‘आफ्ना पिताको विरासत जोगाउन मबाहेक अरुले सक्दैन र सक्ने कुरा पनि आउँदैन’ थापाले भने ‘नेपाली कांग्रेसमा मेरो बुबा (स्व.सूर्यबहादुर थापा) को उच्च योगदान छ, मैले कंग्रेसमा गएर उहाँको पूरानो विरासतलाई जोगाइराख्न सक्छु ।’
उनले पटकपटक आफु बाधको छोरा भएकाले बाध नै हुने हुंकार पिटिरहेका छन् । तर, उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरिसकेका कारण उनले स्व. थापाको लिगेसी बचाइराख्ने सम्भावना कल्पना मात्रै हुनसक्छ ।
यता, कुमार थापालाई पनि धनकुटामा आफ्नो राजनीति बचाइराख्न त्यति सजिलो छैन । आर्थिक रुपमा सम्पन्न सुनीलबहादुर थापासामू आर्थिक व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले उनले आफुसँग भएका कार्यकर्ता बचाइराख उत्तिकै समस्या छ । यसका लागि उनले नयाँ कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ ।
नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि उनको भागमा १५ सय क्रियाशील सदस्य वितरण गर्न पाउँछन् । तर, उनीसँग १५ सय कार्यकर्ता छैनन् । १५ सय कार्यकर्ता नै नभएपछि भएभरका भोटरलाई क्रियाशील सदस्यता दिलाउनुपर्ने बाध्यता उनीसामू छ ।
किनकी राप्रपामा खासै क्रियाशील कार्यकर्ता छैनन् । भएका कार्यकर्ताहरु पनि खुलेर लाग्न सक्दैनन् । गत निर्वाचनसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि जिल्लामा राप्रपामा ४ सयको हाराहारीमा सक्रिय कार्यकर्ताछन् । त्यसका पनि झण्डै ६० प्रतिशत कार्यकर्ता कुमारबहादुर थापाको पक्षमा लागेको देखिन्छ ।
एकाएक राजनीतिमा छिरेर सभासद बनेको र मन्त्री पनि बनेपछि उनलाई आफ्नो राजनीतिक हैसियत उच्च रहेको भान छ । तर उनी र उनका बुबा सूर्यबहादुर थापालाई पटकपटक निर्वाचित गराउने कार्यकर्ता जति राप्रपामै रहेपछि उनी संकटमा परेका छन् ।
अबको चुनाव प्रतिष्ठाको विषय
राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस जहिले शक्तिमा छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता हुनअघिसम्म नेपाली कांग्रेस नै ठूलो पार्टी थियो । तर, धनकुटाको हकमा भने नेपाली कांग्रेसले कहिले शिर उठाउन पाएन ।
सूर्यबहादुर थापाको जीवनकालभर धनकुटा क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेन । कतिपय निर्वाचनमा त जमानत समेत फिर्ता गराउन असफल बन्यो ।
यस्तो अवस्थामा थापा पुत्र सनीलबहादुर थापा कांग्रेस प्रवेश गर्दा कांग्रेसलाई केही राहत मिलेको छ । तर, समग्र कांग्रेसलाई भने राहत मिल्ने देखिँदैन । किनभने कांग्रेसभित्रको गुटको राजनीतिभित्र नपसी थापालाई सुख्खै छैन ।
‘नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक जिल्लामा उच्च पद पाएको छ, यो नेपाली कांग्रेसका लागि खुसीको कुरा हो’ नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति अग्नी पौडेल भन्छन्, ‘उहाँ (सुनील) ले जिल्लामा रहेका सबै कांग्रेसलाई मिलाएर जान सक्नु भयो भने नेपाली कांग्रेसलाई फाइदै हुनेछ ।’
स्वभाविक रुपमा थापा अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा क्याम्पमा लाग्छन् । तर, देउवा इतर क्याम्पका कांग्रेसीहरुले थापालाई साथ दिने देखिँदैन । एकातिर राप्रपा भित्रको ठूलो खेमाले साथ नदिनु र धनकुटेली कांग्रेसको अर्काे तप्काले अहिलेसम्म साथ नदिएको अवस्था हेर्दा सुनीलबहादुर थापाको अबको राजनीतिक यात्रा त्यति सहज नहुन सक्छ ।
काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा, केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चित